China 330kV uMbane Transmission Line Tower Manufacture kunye Factory |XY Tower
XYTower: yenye yeenkampani ezikhokelayo kushishino lokwenziwa kweenqaba entshona China.
Umenzi waseTshayina kunye nomthengisi othumela ngaphandle kwinqaba ephezulu yombane kunye nesakhiwo sentsimbi, buza ngeenkcukacha ezithe vetshe ngoku!
inqaba yothumelo sisakhiwo eside, ngokuqhelekileyo inqaba yensimbi ye-lattice, esetyenziselwa ukuhambisa nokusabalalisa umbane.Sinikezela ngezi mveliso ngoncedo lwabasebenzi abakhutheleyo abanamava amakhulu kweli candelo.Sihamba kuphando oluneenkcukacha, iimephu zeendlela, ukujonga iinqaba, ubume betshathi kunye noxwebhu lobuchule ngelixa sibonelela ngezi mveliso.
Imveliso yethu igubungela i-11kV ukuya kuma-500kV ngelixa ibandakanya iindidi ezahlukeneyo zeenqaba umzekelo i-suspension tower, i-strain tower, i-angle tower, i-end tower njl.
Ukongeza, sisenohlobo lwenqaba eyilwe enkulu kunye nenkonzo yoyilo ekufuneka inikezelwe ngelixa ukuba abathengi abanazo imizobo.
Igama lemveliso 330KV inqaba yoThutho lwaMandla
Ibakala lombane 220kV/330kV
Impahla engekasilwa Q255B/Q355B/Q420B
Unyango lomphezulu Idiphu eshushu ifakwe igalvanized
Ubukhulu begalvanized umaleko ophakathi ubukhulu 86um
Ukupeyinta eyenzelwe wena
Isatifikethi GB/T19001-2016/ISO 9001:2015
Ubomi bonke Ngaphezu kweminyaka engama-30
INkonzo yeNdibano yeNqaba yePrototype yasimahla
indibano ye-prototype tower iyindlela eqhelekileyo kodwa esebenzayo yokuhlola ukuba umzobo weenkcukacha uchanekile na.
Kwezinye iimeko, abathengi basafuna ukwenza indibano yeprototype tower yokuqinisekisa ukuba umzobo weenkcukacha kunye noyilo lulungile.Ke, sisabonelela ngenkonzo yendibano ye-prototype tower simahla kubathengi.
Kwinkonzo yendibano yendibano yenqaba, iXY Tower iyazibophelela:
• Kwilungu ngalinye, ubude, indawo yemingxuma kunye nokujongana namanye amalungu kuya kujongwa ngokuchanekileyo ukufaneleka ngokufanelekileyo;
• Ubungakanani belungu ngalinye kunye neebholithi ziya kujongwa ngononophelo kwibhili yemathiriyeli xa kudityaniswa iprototype;
• Imizobo kunye neebhilidi zemathiriyeli, ubungakanani beebholithi, izigcwalisi njl.njl. ziya kuhlaziywa ukuba kukho impazamo efunyenweyo.
Ukupakishwa kunye nokuthunyelwa ngenqanawe
Yonke into yeemveliso zethu inekhowudi ngokomzobo weenkcukacha.Yonke ikhowudi iya kufakwa isitywina sentsimbi kwisiqwenga ngasinye.Ngokwekhowudi, abathengi baya kukwazi ngokucacileyo ukuba isiqwenga esinye singoluphi uhlobo kunye namacandelo.
Ngaphambili: I-220kV iDouble Loop Transmission Tower
Okulandelayo: I-132kV yeSekethe eMibini iNqaba eNgca